Sary mainty sy fotsy ary miloko miaraka amin'ny Photoshop | Famoronana an-tserasera
La horonan-tsary Tanànan'ny ota miavaka amin'izany fomba tena tsara tarehy aiza ny mainty sy fotsy y loko ka hahatratrarana sary mifanohitra be amin'ny fikitika manokana. Amin'ity lahatsoratra ity dia hianarantsika ny hanao sary miaraka amin'izany fomba izany ary amin'ny fotoana iray dia hahay ny sasany aminy isika fitaovana fototry ny Photoshop mamorona sary manintona kokoa sy hafa. Raha liana amin'ny sinema, sary na mpankafy an'ity horonantsary ity ianao dia tsy manana fialantsiny intsony hamoronana ny sarinao amin'ny fomba madio indrindra. Tanànan'ny ota.
Lo voalohany tsy maintsy manana dia iray sary manta hiasa ao aoriana ao amin'ny Photoshop.
Araka ny hitanao amin'ny sary ambony, ny sary miavaka amin'ny fampiasana ny Fotsy sy maintyna miaraka amina fikitihan'ny loko ity dia teboka ifotoran'ity fomba. Afaka mahita fahasamihafana lehibe eo anelanelan'ny jiro sy ny aloka isika hahatratrarana vokatra toy izao, afaka manaraka ny tolo-kevitra vitsivitsy isika.
Afaka mahazo aingam-panahy amin'ny fijerena ny tranofiara an'ny sarimihetsika.
ny tolo-kevitras hahazoana sary tsara dia ireto manaraka ireto:
Manazava ny faritra sasany dia mafy noho ny sasany hahatratra ny fifanoherana lehibe kokoa eo amin'ny jiro sy ny aloka (Izany dia azo atao amin'ny gooseneck rehetra anananao ao an-trano).
manapa-kevitra Inona avy ireo faritra hasongadinao amin'ny loko sy ireo faritra avelanao ho mainty sy fotsy (asaina alohan'ny sary dia efa fantatrao izay tianao hatao)
Get sary misy kalitao tsara (karakarao ny jiro, ny aloka ... sns)
ny dingana hanaraka Photoshop Ireto manaraka ireto:
Manokatra izahay ny sary ao amin'ny Photoshop
Manao a fifantenana ny faritra tianay hitazomana ny loko (azonao atao ny mampiasa fitaovana fifantina).
Handeha isika select-invert, mamorona sosona fanitsiana ary mifidy ny safidy an'ny mainty sy fotsy.
Mamerina indray izahay mainty sy fotsy araka ny itiavantsika azy.
Ny zavatra voalohany hataontsika dia ny manokatra ny sarintsika Photoshop ary manapaha hevitra hoe faritra iza no hampiova antsika ho lasa mainty sy fotsy ary iza no lokony. Manohy mifantina ny fitaovana izahay andriamby loop ary mamorona fisafidianana amin'ny faritra izay hisy loko eo amin'ny sary.
tsipiriany amin'ny tsipika fifidianan'ny magnet loop
Rehefa avy nanao ny fifantenana dia mankany isika menu ambony ao anatin'ny safidy ianao fifantenana mitady isika mampiasa vola.
Ny dingana farany dia ny mamorona a fanitsiana sosona, noho izany dia mandeha any amin'ny farany ambanin'ny faritra sosona ary safidio ny kisary fanitsiana, ao anatin'ity fizarana tsindrio ny safidin'ny mainty sy fotsy.
Efa manana ny zavatra ilainao ianao izao dia mila miasa fotsiny ianao ary manomboka mamorona sarinao manokana. Ao amin'ny ampahany amin'ny arriba afaka mahita ilay video-tutorial ny fomba fiasa ny ampahany farany amin'ny Photoshop.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Saripika mainty sy fotsy ary miloko
Juan | matoanteny dia hoy izy:
Ny sarin'io vehivavy mena io dia toa miavaka, ary ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaina dia ny momba ilay horonantsary Quentin Tarantino "Sin City." Ny lalao gamut miloko mena sy ny fizotran'ny dingana tsirairay, dia vita tsara.
Mamaly an'i Juan | matoanteny
Drafitra sa dokam-barotra?